दाङ-असार महिना सकिनै लाग्दा जिल्लामा धान रोपाइँँ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस वर्ष चाँडै वर्षा सुरु भएकाले असार महिनामै खेती भएको हो । जिल्लामा हालसम्म करिव ७५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ । “यस वर्ष समयमा नै वर्षा भएकाले धेरै रोपाइँ सकिएको छ” कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि प्रसार अधिकृत भरत पोखरेलले भने । असार अन्तय वा साउनको पहिलो साता सम्ममा धान रोपाइँ सकिने उनको भनाइ रहेको छ । “यस वर्ष पानी निरन्तर पारेकाले आकासको भरमा खेती गर्ने स्थानमा पनि खेती गरी सकिएको छ” कृषिप्रसार अधिकृत पोखरेलले भने ।
जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । घोराही तथा पश्चिम दाङका केही क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुन बाँकी रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधीमा करिव ४० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष समयमा पानी नपरेको कारण कम क्षेत्रमा रोपाइँ भएको थियो ।
समयमा खेती गर्ने पाएपछि कृषकहरुसमेत खुसी भएका छन् । पानीको कारण खेती गर्ने समस्या हुने कृषकहरुले यस वर्ष त्यस प्रकारको समस्या भोग्नु परेन । दाङमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु पर्ने जमिन अझै पनि प्रशस्तै रहेको छ । मनसुनले साथ दिए पछि ती जमिनमा गरिएको खेती पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुने कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले अनुमान गरेको छ ।
यो वर्ष करिब थप ३ हजार हेक्टरमा खेती हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । “यो वर्ष ३८ हजार भन्दा धेरै हेक्टरमा धान खेती हुन्छ होला”, कृषि प्रसार अधिकृत पोखरेलले भने । कोरोना सङक्रमणको कारणले गर्दा विदेश गएकाहरु फर्किएकाले पनि खेतीका लागि जनशक्ति थपिएको छ । “ठ्याक्कै तथ्यांक त संकलन भइसकेको छैन, स्थानीय तहसँग मौखिक जानकारी लिँदा बाँझो जमिन नरहने गरी खेतीको तयारी भइरहेको सूचना हामीसँग छ”, कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसारक अधिकृत पोखरेलले भने । अघिल्लो वर्ष ३५ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो ।
यो पटक दाङमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । बाँझो खेतहरु यस वर्ष अत्यन्तै कम रहेका छन् । बाँझो जमिन खोज्दै ठेक्का वा अधियामा धान खेती गर्नेहरुको संख्या थपिएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । कुनै समयमा दाङलाई राप्ती अञ्चलको अन्न भण्डार मानिन्थ्यो । दाङमा उत्पादन भएको धानले साविक राप्ती अञ्चलका ५ जिल्लालाई खान पुग्थ्यो ।
तर, कृषि मजदुरको अभाव र प्लटिङले गर्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो । दाङको उत्पादकत्व सन्तोष गर्न लायक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । दाङको जमिनमा प्रतिहेक्टर साढे ३ देखि ४ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्दछ । यसपालीको मौसमले पनि खेतीलाई साथ दिएको छ । लकडाउनले कृषि श्रमिकको समस्यालाई पनि केही मात्रामा हल गरेको छ भने खेतीतर्फ आकर्षण पनि थपेको छ । समय मै मनसुन भित्रिएका कारण पनि खेती गर्नेहरुलाई सजिलो भएको छ । सामान्य भन्दा दुई दिन ढिलो मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको भए पनि यसपालिको मनसुनमा नेपालभरि नै सामान्य वा औसत वर्षा भइरहेको छ । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा मनसुन भित्रने मिति जुन १० मानिन्छ ।
जिल्लामा लोपोन्मुख स्थानीय बालीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । परम्परागत रुपमा खेती गरिँदै आएका बालीहरुप्रति पछिल्लो समयमा आकर्षण बढेको कृषिका अगुवाहरु बताउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको जैविक विविधता कृषि सहकारी संस्थाले लिवर्ड संस्थाको सहयोगमा वि.सं. २०६४ सालदेखि यस क्षेत्रमा स्थानीय जात संकलन गर्ने र संरक्षण गर्दै आएको छ ।
त्यसका लागि जिल्ला भरबाट उक्त स्थान छनोट गरिएको जैविक विविधता कृषि सहकारी संस्थामा संस्थापक अध्यक्ष राममणि पाण्डेलले जानकारी दिए । लिवर्ड संस्थाले करिव ६ वर्ष यस कार्यका लागि सहयोग गरेको स्थानीयले बताएका छन् । यसरी लोपोन्मुख स्थानीय बाली संरक्षण र यसका बारेमा जानकारी लिएपछि स्थानीयको यसतर्फ आकर्षण बढेको संस्थापक अध्यक्ष पाण्डले बताए । “संस्थाले स्थानीय जातको महत्वबारे जानकारी दिए पछि अहिले स्थानीय लोपोन्मुख जात प्रति आकर्षण बढेको हो”, संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले भने, “यसअघि स्थानीय जातलाई विश्वास नगर्नेहरु पनि विश्वास गरेर खेती गर्न थालेका छन् ।”
स्थानीयले स्थानीय जातको बालीको महत्व बुझेपछि अपनत्व समेत गरेको उनको उनले बताए । अहिले स्थानीयस्तरमा पाइने बाली संकलन गर्ने तथा संरक्षण गर्ने काम भइरहेको पाण्डेले बताए ।